၆ အဆင့် Reboot အစီအစဉ် - ကျွန်ုပ်ကိုရပ်တန့်စေသည့်သင်၏ Brain On Porn
၆ အဆင့် Reboot အစီအစဉ်သည်ကျွန်ုပ်အားဆေးလိပ်ဖြတ်နိုင်ရန်ကူညီခဲ့သည်
၃၆၇ ရက်မှာအမှေးမှိန်တုန့်သွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကကျွန်ုပ်သည်ရပ်တန့်ရန်အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ပြီးပျက်ကွက်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်အရှုံးမပေးမှီတိုင်အောင်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုထိ မိ၍ နောက်တဖန်ကြိုးစားပါ။ PO မပါဘဲတစ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်ကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးလုပ်ငန်းစဉ်ကို reboot လုပ်လိုက်ပါတယ် ခြောက်လ Key ကိုခြေလှမ်းများ.
ဒါဟာအခြေခံအားဖြင့်“ ငါဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲ” ဆိုတာပါပဲ။
*** အကြောင်းသတိပြုစရာများ ***
ဒီ site ကိုသုံးပြီးငါ့ကိုလူတိုင်းကကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပန်းတိုင်များရှိပြီးနားလည်သဘောပေါက်စေတော်မူ၏။ ဤအစီအစဉ်အကြှနျုပျအဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကားအဘယ်သို့လူတိုင်း, ဒါမှမဟုတ်မည်သူမဆို, အခြားအလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ငါမှာ PIED (သို့) ED ရှိတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်မင်းက porn ကိုစွန့်ပြီး PIED ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်၊ ဒါကသိပ်ကိုအထောက်အကူမပြုနိုင်ဘူး။ ED နှင့်အတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်တစ်ခါတစ်ရံသီးခြား reboot မဟာဗျူဟာများလိုအပ်ပြီး MO ကိုမကြာခဏစွန့်ခွာလိုကြသည်။ ဒါကြောင့်ဒီဟာကသင့်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ (ဝမ်းနည်းပါတယ်)
reboot များအတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတဲ့ touchy ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ကြှနျတေျာ့အစီအစဉ်ကိုနောက်ဆုံးမှာ MO ကိုခွင့်ပြုနိုင်အောင်ငါလိုလားတဲ့ MO ကိုတပ်၌ဖြစ်၏။ ဒါပေမဲ့မှတ်စုအစီအစဉ်၌ငါအစအဦးအနည်းဆုံးယာယီ MO ကိုဖြတ် porn ဖြတ်ဖို့လုံးဝအလွန်အရေးပါသည်ထင်ပါတယ်။ သငျသညျအခိုငျအမာ anti-MO ကိုစခန်းထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်ဤအထောက်အကူဖြစ်စေမတှေ့နိုငျသညျ။
ငါ reboot စလုပ်တုန်းကတစ်ယောက်တည်းပဲ။ သင်ဆက်ဆံရေးတစ်ခုရှိပါကဤအရာသည်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ လိင်ကအစပျိုးပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏အစီအစဉ်သည်လိင်နှင့် MO ကိုအနည်းဆုံးတစ်လအထိချန်လှပ်ပြီးအနည်းဆုံး ၃ လကြာသည်။ သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားသင်၏ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုကန့်သတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အနည်းဆုံး ၃ လ (သို့မဟုတ်ကြာမြင့်စွာကြာမြင့်ခြင်း) နှင့် ပတ်သက်၍ မရိုးသားပါက၎င်းကိုအကူအညီပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ (စိတ်မကောင်းပါ၊ ထပ်မံ)
ထို့ကြောင့်သင်သည် PIED သို့မဟုတ် ED ခံစားခဲ့ရပြီး / သို့မဟုတ် MO မှထွက်ခွာလိုပါကဤအစီအစဉ်သည်သင့်အတွက်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါပေမဲ့မင်းကသင်ဟာအစွမ်းမရှိဘူး၊ စွဲလမ်းနေတယ်၊ ​​နင့်ကိုကြည့်ပြီးမကြည့်ချင်ဘူးဆိုရင်၊ ဒါကမင်းကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ ဒါကငါလုပ်ချင်ခဲ့တယ်ဒါငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
တစ်အောင်မြင်သော Reboot စေရန်ခြောက်လခြေလှမ်းများ
အဆင့် 1 - မဆိုနဲ့အားလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုထွက် Cut: သင်သည်နောက်ထပ်သတိထားမိသည်အထိလိင်ခြားသူဖြစ်လိမ့်မည်။ လိင်၊ လိင်အကြောင်းမစဉ်းစား၊ လိင်အကြောင်းမစဉ်းစားရန်၊ ပရောပရည်ပြုလုပ်ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊ တပ်မက်ခြင်းကင်းမဲ့ခြင်း၊ မိန်းကလေးများ (သို့မဟုတ်ယောက်ျားလေးများ) ၏မြည်းများ သူမ၏ boob ကိုမကြည့်၊ ဒုတိယအခြေစိုက်စခန်း၊ တတိယအခြေအနေမရှိ။ ဘာမှမ SEX သည်အခြားလူသားတစ် ဦး နှင့်တရင်းတနှီးရှိသကဲ့သို့နောက်ပိုင်းတွင်အားပေးသည်။ သို့သော်ပထမလတွင်မဟုတ်ပါ။ သင်သည်စစ်မှန်သောလိင်သည်သင့်အတွက်အစပျိုးခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုရပါမည် (နောက်အဆင့်ကိုကြည့်ပါ) ။ သင်၏ gf သို့မဟုတ် bf၊ ဇနီးသို့မဟုတ်ခင်ပွန်း၊ fb တို့နှင့်အတူထိုင်။ သင်၏ reboot ရည်မှန်းချက်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်လိင်ဆက်ဆံမှုမှမည်သို့မည်ပုံရှိမည်ကိုသူတို့အားဝေမျှနိုင်သည်။ မျှော်လင့်သူတို့နားလည်နိုင်ပါတယ်။
အဆင့် ၂ - အစပျိုးခြင်းများကိုရှောင်ပါ။ သင်အစပျိုးမှုများကိုရှောင်ရှားခြင်းမပြုဘဲအဆင့်တစ်ဆင့်ကိုပြီးမြောက်အောင်မလုပ်နိုင်ပါ။ ငါကရေးသားခဲ့သည် အစပျိုးခြင်းအကြောင်းကို post ကို အစောပိုင်းငါ၏အ reboot ၌တည်၏။ ငါ့ကိုလိင်ဆက်ဆံလိုသောဖြစ်နိုင်သည့်အရာအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုခဲ့သည်။ သင်အမှန်တကယ်ဒီတစ်ခုပေါ်တွင် box ထဲကအပြင်ဘက်စဉ်းစားရန်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတိုက်ရိုက်သုံးစွဲစေသည့်အရာများမဟုတ်ပါ။ ဤအရာသည်သင်မစဉ်းစားမိသောတီဗွီအစီအစဉ်များသို့မဟုတ်အချို့သောလူမှုရေးအခြေအနေများကဲ့သို့အထီးကျန်ဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့သောအရာများဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအရာသည်တစ်နေ့တာလုံးတွင်လိင်စွမ်းအင်ကိုတိုးပွားစေသည်။ သူတို့ကိုရေးချပါ၊ ထို့နောက်သူတို့ကိုရှောင်ပါ။ အားလုံးနီးပါးသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုသည့်အဖြစ်အပျက်များဖြစ်ခြင်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ porn အသုံးပြုခြင်းမှတစ်ဆင့်ဖြန့်ချိသောအစပျိုးခြင်းများဖြင့်စတင်သည်။ ပြီးတော့သင်အမှန်တကယ်စွဲစွဲလမ်းနေသောအရာအားလုံးကိုရပ်တန့်ခြင်းထက်ခလုတ်အလယ်ပြုမူခြင်း (ရုပ်သံလိုင်းပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖေ့စ်ဘွတ်မှထွက်ခြင်း) ကိုတားဆီးရန်ပိုလွယ်သည်။ ဒီ Read.
အဆင့်3- လိင်နှင့်ထိန်းချုပ်ထားတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ: ဖြစ်ကောင်းအများဆုံးအငြင်းပွားဖွယ်ခြေလှမ်း။ MO နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်မှာ၎င်းသည်အလွန်ထိန်းချုပ်ထားသောနည်းလမ်းဖြင့်လုပ်သမျှကာလပတ်လုံး၎င်းသည် reboot လုပ်စဉ်အတွင်း porn ကိုဖြတ်တောက်နိုင်ဆဲဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်ပြုပြီးပြီ) ဖြစ်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်အလွန်နောက်ဆုံးသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးညစ်ညမ်းမှုနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမှကင်းဝေးပြီးအလွန်နည်းပါးစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဤတွင်ငါလိုက်နာသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖြစ်ကြသည်
အဘယ်သူမျှမ MO ကို အနည်းဆုံးပထမလတွင် (သို့မဟုတ်လိင်) ။ သင် slate ရှင်းလင်းဖို့ဒီလလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီဟာကိုကြာအောင်မလုပ်နိုင်ရင်စိတ်မပူပါနဲ့။
ဘယ်အချိန်မှာ MO ကိုမှ: တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပါဘဲသင်တတ်နိုင်သမျှအမြဲတမ်းသွားပါ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်သင်အားအော်ဂဇင်မပါဘဲအခြားတစ်ရက်မသွားနိုင်သည့်အခါ၌အလွန်နောက်ဆုံးသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သင့်သည်
ဘယ်လို MO ကိုမှ: ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ၊ တီဗွီ (အိပ်ရာပေါ်မှာအိပ်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းစသည်ဖြင့်) မှဝေးဝေးသို့ထွက်သွားပါ။ - စိတ်ကူးမထားပါနှင့် တိုစွာ သင်အမှန်တကယ်ရှိခဲ့သော (သို့မဟုတ်) သင်အမှန်တကယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည် -> cum ဖြစ်နိုင်သည့်အစစ်အမှန်အခြေအနေများကိုစဉ်းစားပါ။ ဒီကိုဆွဲထုတ်မထားပါနဲ့။
MO ကိုပြီးတဲ့နောက်: သင်၏ No MO Count ကိုစိတ်ပိုင်းပြန်လည်ထားရန်အရေးကြီးသည်။ သင်0သို့ပြန်သွားသည်နှင့်သင်၏နောက် MO တစ်ခုမတိုင်မီသင်တတ်နိုင်သမျှကြာရှည်စွာစောင့်ရမည်။ အကယ်၍ သင်ဤအရာကိုမပြုလုပ်ပါကသင်ပုံမှန်အားဖြင့်ထိန်းချုပ်မှုမရှိသော MO သို့ပြန်သွားပါက PO ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် MO ကိုသင်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားအမြဲတမ်းတက်ကြွစွာစဉ်းစားပါ။
MOS အချိန်စာရင်းမစ: တစ်ဦးကအချိန်ဇယားကိုကျိန်းသေတဲ့ခလုတ်ဖြစ်သောမျှော်လင့်ရန်ဦးဆောင်
ကန့်သတ် MO ကို တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ထက်မပိုရန်: သင်တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး MOing မရသင့်ပါတယ်။ သငျသညျလြှော့အရှုံးပေးမတိုင်မီမဟုတ်တော့ဒီထက်အများကြီးမသွားနိုင်ပါဖြစ်သင့်သည်။ ငါသေချာငါနေသမျှကာလပတ်လုံးငါ MOing မတိုင်မီတတျနိုငျသအဖြစ်သွားစေမယ့်လမ်းညွှန်အဖြစ်ဤအသုံးပြုသော
ဒီတော့ဒီမှာစိတ်ကူးကတချို့ယောက်ျားတွေအတွက်၊ ငါလိုလပေါင်းများစွာအော်ဂစ်စလုပ်တာမျိုးဟာမတွေးဝံ့စရာပါ။ ငါကြိုးစားခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါကျရှုံးမှာသေချာတယ် (ငါအကြိမ်များစွာလည်းရှိခဲ့တယ်) ။ ဒီတော့ခင်ဗျားတကယ်လုပ်ရမယ်ဆိုလျှင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်စိတ်ကူးယဉ်မှုများမှဖယ်ထုတ်ပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကယ်ဆယ်နိုင်သည့်နည်းအတိုင်းပြုလုပ်ပါ။ ငါကဒီနည်းလမ်းအတိုင်းပဲရပ်တည်နေတယ်၊ ​​ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကငါ့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့လို့ဖြစ်ပြီးညစ်ညမ်းတဲ့ပုံမဟုတ်တော့ဘူး။ ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကို porn ထက်အခြားအရာများနှင့်ဆက်စပ်ရန်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုလေ့ကျင့်နေသည်ဟုခံစားမိသည်။ လိင် - အကယ်၍ သင့်တွင်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်အမှန်တကယ်လုံခြုံစိတ်ချရသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုရရှိနိုင်ပါက၎င်းသည် ပို၍ ပင်ကောင်းသည်။ သို့သော်လည်းအနည်းဆုံးတစ်လအကြာ၌၎င်းစွမ်းအင်ကိုသင်တည်ဆောက်ပြီးမှသာလျှင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုသာငါအကြံပြုသည်။
4 Step - ဖြည်းဖြည်းချင်းကျန်းမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှပြန်လာ: ၃ လခန့် (ကျွန်ုပ်အတွက်၊ အခြားသူများအတွက်ပိုကြာနိုင်ခြင်း) လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမရှိသလောက်နည်းပါးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်တဖြည်းဖြည်းပုံမှန်စီစဉ်ထားသောပရိုဂရမ်းမင်း၊ သင်နှင့်အဆင်ပြေသောကျန်းမာသည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူအမျိုးအစားများစာရင်းကိုရေးသားရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ ထို့နောက်သင်၏ဘဝထဲသို့ပြန်ထည့်သွင်းပါ။ သင်သည်ယခုအချိန်တွင်အစပျိုးခြင်းကိုရှောင်ရှားနေသော်လည်းသင့်ကိုယ်သင်ကျန်းမာသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုတွေ့ကြုံခံစားခွင့်ကိုခွင့်ပြုထားသည်။ အနည်းငယ်သာလုပ်ခြင်းဖြင့်သာစတင်ပါ (လိင်ဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကိုတည်ဆောက်ပါ) ။ ငါ့အတွက်၊ လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်ငါပုံမှန်ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုသို့တဖြည်းဖြည်းပြန်ရောက်လာသည်။ ဤအချက်အားဖြင့်ဤအပြုအမူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများထက်ပိုမိုနှစ်သက်စရာဖြစ်လာသည်။ သူတို့အားအစပျိုးသတိရပါ။
5 Step - အဖြစ်မှန်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်: porn သည်မုသားဖြစ်သည်။ သင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ကျန်းမာသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုစတင်ကျင့်သုံးလာသည်နှင့်အမျှသင်၏ ဦး နှောက်သည်စိတ်ပျက်မိနိုင်သည်။ သင်၏ gf သို့မဟုတ် bf သည်ဆံပင်၊ ၀ တ်၊ စုပ်ယူနိုင်သည့်ပြည့်စုံသောညစ်ညမ်းသောပုံစံမဟုတ်ပါ။ သင်သည်လိင်အရခွင့်မပြုပါ၊ ဘယ်အချိန်မှာသင်လိုချင်တဲ့သူနဲ့မဆိုလိင်ဆက်ဆံလို့မရဘူး။ တချို့လူတွေကသင့်ကိုအဲဒီလိုမဟုတ်ကြပါ၊ သငျသညျ cheeseburger ကဲ့သို့သောလိင်ကြင်ဖော်ကိုမမှာနိုင်ပါ၊ ပြီးတော့ဘဝဟာမင်းနေမကောင်းတဲ့လှည့်စားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မှုများနဲ့မတူပါ။ အဲဒါကိုကိုင်တွယ်ပါ။ ကျွန်တော် reboot လုပ်တဲ့အချိန်မှာငါ (နှင့်ငါ့ ဦး နှောက်) ကဒီခက်ခဲပြီးခက်ခဲတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုသတိရှိရှိလက်ခံခဲ့ရတယ်။ အစစ်အမှန်ဘဝသည် porn မဟုတ်ပါ၊ porn သည်အစစ်အမှန်မဟုတ်ပါ။
အဆင့်6- တစ်ဦး NEW ဝါသနာကိုတက်ယူ: မည်သည့်ဝါသနာကိုမဆိုဝါသနာပါပါ။ သို့သော်၎င်းသည်လတ်ဆတ်သောအရာတစ်ခုခု၊ သင်အရင်ကမလုပ်ဆောင်ဖူးသည့်အရာတစ်ခုကိုသေချာစေပါ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ရက် ၃၀ လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုပါ။ ဤအရာသည်သင့်အားလိင်မှုကိစ္စမှရှောင်ရှားခြင်းမှနောက်ဆုတ်သောစွမ်းအင်ကိုယူပြီး (နောက်ပြောင်နေသော်လည်းလေးနက်သည်) ၎င်းကိုသနားခြင်းနှင့်စိတ်ပျက်ခြင်းမှအပအခြားအရာတစ်ခုသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။ သင်သည်အကျင့်ဟောင်းတစ်ခုကိုဖြတ်တောက်ပြီး၎င်းကိုကျွမ်းကျင်မှုအသစ်ဖြင့်အစားထိုးလိုက်သည်။ ဒီဝါသနာအသစ်မှာနောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက် (သို့) အဆုံးနေ့ (ကြံ့ခိုင်ရေးပရိုဂရမ်သို့မဟုတ်အနုပညာစီမံကိန်းလို) ရှိရင်ဒါကအကူအညီဖြစ်စေလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကိုသေချာစေပြီးစိတ်ပျက်စရာကောင်းသောအရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။
ဒါ့ကြောင့်လိင်ကိစ္စကိုတားမြစ်ခြင်း၊ အစပျိုးခြင်းကိုရှောင်ရှားခြင်း၊ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ လိင်ကိစ္စသို့ပြန်လာခြင်းနှေးကွေးခြင်း၊ နောက်တဖန်ဒီလူတိုင်းအတွက်အလုပ်မလုပ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူကငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်ငါကဒီမှာတွေ့မြင်ပစ္စည်းတွေနှင့် YBOP နှင့်အညီပါပဲ။ ခင်ဗျားဒီအထောက်အပံ့ကိုတွေ့ပြီလားသိချင်ပါတယ်၊ နောက် ၃၆၇ ရက်မှစပြီးမင်းရဲ့အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းကိုဖတ်ချင်ပါတယ်။
အပိုဆုအကြံပြုချက်: အစားထိုးခြင်းကိုသတိပြုပါ၊ ငါအတွက်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်အခြားကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သော (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ) အပြုအမူတွင်ပါ ၀ င်ရန်ပိုမိုပြင်းထန်သည့်တိုက်တွန်းမှုဖြစ်သည်။ ဒါမင်းကိုဖြစ်ပျက်နိုင်တယ် ငါကသတိရှိရှိသတိထားဖြစ်ခြင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အရက်သောက်ခြင်း၊ သူစိမ်းများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းစသည့်အခြားကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောအပြုအမူများပြုလုပ်နေလျှင်သင်အနေဖြင့်ထိုအပြုအမူများကိုညစ်ညမ်းသောနေရာတွင်အစားထိုးရန်မကြိုးစားပါနှင့်။
LINK - ၆ အဆင့် Reboot အစီအစဉ်သည်ကျွန်ုပ်အားဆေးလိပ်ဖြတ်နိုင်ရန်ကူညီခဲ့သည်
ကန ဦး pos - တစ်နှစ်အစောပိုင်း
Re: TJ3 - ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကဗျာ - ဂျာနယ်
ရက်အတွက် 1-3: လမ်းညွှန်ချက်များ
အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်မှာငါ Rebooting လုပ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့အတွက်ငါဘာအဓိပ္ပါယ်ရှိသေးမလဲ ငါမိတ်ဆက်စကားပြောသကဲ့သို့ငါ, ငါသွားအဖြစ်ဤထွက်ရှာဖွေစီစဉ်။ ယခုထိကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သောစုံတွဲများနေ့များတွင်ကျွန်ုပ်အတွက်ကျွန်ုပ်ရေးသားခဲ့သောအကြံပြုချက်အနည်းငယ်ရှိသည်။
အသိပညာပါဝါဖြစ်ပါသည်: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦး နှောက်ထဲမှာ dopamine ကိုတုံ့ပြန်သော circuit လမ်းကြောင်းများနှင့်ယုတ္တိဗေဒကိုတုံ့ပြန်သော circuit များအကြားတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပွားနေသည်။ တစ်ခုမှာထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိပြီးအလိုလိုသိပြီးအခြားတစ်ခုမှာသိမြင်မှုနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်။ Dopamine သည် impulsive circuit ကိုလောင်စာအဖြစ်အသိပညာပေးသကဲ့သို့ logical circuit ကိုလောင်စာဖြစ်စေသည်။ ယခုအချိန်အထိ Dopamine Army သည်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအုပ်ချုပ်နေပြီးခွန်အားကြီးသောစစ်တပ်ရှိသည်။ dopamine စစ်တပ်အားအင်အားချိနဲ့အောင်လုပ်ရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ ရိုးရိုးလေးပါအသံထွက်ပါ၊ သို့သော်ရက်သတ္တပတ် (၁) တွင်မီးလောင်ရန်လွယ်ကူပြီးတစ်နည်းနည်းဖြင့်အကြာတွင်ထိုစိတ်ဓာတ်ကျသွားပြီးမကောင်းသောအလေ့အထထဲသို့ပြန်ဝင်သွားသည်။
အကြောင်းကြားနေ့စဉ်နေဖို့: ငါသည်ဤပြဿနာအပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပညာပေးအလွန်အရေးပါသည်ထင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ max ကိုတစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ဦးတစ်နေ့လျှင်ကို restart porn စွဲ / အကြောင်းကိုနှစ်ခုဆောင်းပါးတွေမှာဖတ်ပါ, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကိုလွှမ်းမိုးဖို့မကြိုးစားကြည့်ပါ။ ငါသည်ငါ့အသိပညာကြည်းတပ်အားနည်းခြင်းနှင့် Dopamine အမှုထမ်းဖို့ပိုပြီးပါဝါပေးခြင်း, ငါရပ်တန့်မယ်ဆိုရင်ငါလုပ်ရပ်တွေဟာဆုံးရှုံးမည်ကိုစိုးရိမ်နေကြသည်။
သငျသညျအစာကိုစားသောအရာကိုသတိထားပါ: ညစ်ညမ်းခြင်းကအစားအသောက်နဲ့တူတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်လာတယ် ရည်ရွယ်ချက်မှာပစ္စည်းပစ္စယများကို ဖြတ်၍ သဘာဝ၊ အော်ဂဲနစ်အစားအစာသို့ပြန်သွားရန်ဖြစ်သည်။ အစာစားခြင်းကဲ့သို့ပင်သင်အမြဲတမ်းသင်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့မည်သည့်အရာများထည့်သွင်းထားကြောင်းကိုအမြဲတမ်းသတိထားရန်လိုအပ်သည်။ အာဟာရအကြောင်းသင်များများလေ့လာလေ၊ သင်သည်မကောင်းသောအစာများ၏ဆိုးကျိုးများကိုသတိပြုမိလာပြီး၎င်းကိုမပြုလုပ်မိစေရန်တားဆီးနိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အတူတူပင်၊ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သော်လည်း -“ လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲမှု” - အချိန်ယူရသည်။
အဆက်မပြတ်စဉ်းစားရမည် သင်၏စွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ - သွေးဆောင်မှုကိုမရင်ဆိုင်ရရင်တောင်။ သင်ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ရမလဲဆိုတာမစဉ်းစားခင်သင့်သားရဲရှေ့မှာသင့်ကိုမစောင့်ပါနဲ့။ Dope တပ်မတော်ကိုကာကွယ်ရန်အသိပညာတပ်မတော်ကိုအမြဲလေ့ကျင့်ပါ။
အားလုံးအစပျိုးခြင်းအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ရှောင်ရှား: ဤသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်းချက်မှာ MOing ကိုရပ်တန့်ရန်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည် reboot လုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် porn သည်ဘေကွန်နှင့်ကြက်ဥ၊ ဆား၊ သငျသညျတစျခုအဘို့အရသာဆုံးရှုံးသည်အထိတစ် ဦး သည်surelyကန်အမှန်အခြားတစ်ခုကို ဦး ဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မည်။ အစပျိုးခြင်းသည်အစစ်အမှန်ရာဇ ၀ တ်မှု၏ရှေ့ပြေးဖြစ်သည်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်အရာထက်သူတို့ကိုရှောင်ရှားရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ Triggers များသည် Facebook ၏သူငယ်ချင်းသူငယ်ချင်းများ၏ဓါတ်ပုံများကိုရိုက်နှက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျင်းဖို့ခွင့်ပြုခြင်းကဲ့သို့ပင်ထင်ရှားနိုင်သည်။
သင်တို့၏အကြံအစည်စဉျးစားကွညျ့ ခလုတ်ခုံတစ်ခုကိုတွေ့သောအခါဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာနှင့်သင်မည်သို့တုံ့ပြန်လိုသည်ကိုသတိရှိရှိပြောပါ။ သတိပြုရန်မှာခလုတ်ကိုတုန့်ပြန်ခြင်းနှင့်လျစ်လျူရှုခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောရလဒ်များကိုသတိရှိရှိဖော်ပြပါ။ ဦး နှောက်ကစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတုံ့ပြန်ပြီးအကောင်းဆုံးသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်တတ်နိုင်သမျှကြိုးစားပါ။ "ငါအခုအချိန်မှာ ___ ခံစားနေရတယ်။ ချင်တယ် ___။ ငါလုပ်ရင်ငါခံစားရလိမ့်မယ်။ ငါမလုပ်ရင်ငါခံစားရလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုငါ ___ ကိုရွေးလိမ့်မယ်။
နေ့စဉ်ဂျာနယ်: ဤသည်ငါ့ကိုတာဝန်ခံနှင့်ရပ်ရွာနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်စောင့်ရှောက်။ ဒါဟာအစကခက်ခဲငါ့ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကို, ငါ့တိုးတက်မှုအကြောင်းကိုအခြားသူများအိပ်စေသည်။ ငါသည်လည်းရပ်ရွာကနေပိုပြီးအသိပညာရဖို့။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုမကြောက်ပါနှင့်ဖြေ - အထက်ပါအကြောင်းပြချက်ကြောင့် MOing ကိုကျွန်တော်ဖြတ်တောက်လိုက်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်လုပ်ဖို့အရမ်းခက်ခဲပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်က PMO ကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ MOing ဟာရှုံးနိမ့်မှုမဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိရဖို့လိုတယ်။ ငါ MO'ed မလုပ်ရသေးဘူး၊ ငါ reboot မလုပ်မချင်းတော့စီစဉ်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် TBH ကိုထပ်ထပ်ချရင်ငါမအံ့သြဘူး။ ငါလုပ်ရင်ငါဒါပဲ MOO၊ PMO (သို့) FMO (စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်) မဟုတ်ဘူးဆိုတာသေချာဖို့လိုတယ်။ Dopamine ကြည်းတပ်ကိုစစ်ပွဲတစ်ခုအနိုင်ရတယ်လို့မထင်စေချင်ဘူး။
ယောက်ျားတွေ, ငါဒီအလုပ်ဖြစ်တယ်မျှော်လင့်ပါတယ် ... ယခုအချိန်အထိ, ဒါကောင်းသော။ အနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်စိတ်ပျက်ပေမယ့်ငါတို့မြင်ပါလိမ့်မယ်။ ဆက်ပြီးနားထောင်ပါ…